Google Glass 2.0: sawirada ugu horeysay ah - Rule News
Google Glass 2.0: sawirada ugu horeysay ah
version cusub ee computer madaxa-dhajinta Google ayaa shaaca ka qaaday in fayl dawladda Maraykanka ah.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Google Glass 2.0: sawirada ugu horeysay ah” waxaa qoray Alex Hern, waayo theguardian.com on Tuesday December 29 2015 12.19 UTC
Inkastoo waxaa dilay off bilowgii sanadkan, Google ayaa shaaca ka qaaday version cusub oo ay Glass computer wearable, loogu talagalay si ballaadhan loogu at ganacsiga ganacsi sida caafimaadka iyo wax soo saarka.
In diiwaan gelintii la guddiga isgaarsiinta federaalka American, Shirkadda search uu leeyahay daabacay sawirada ugu horeysay qalabka uqaabaynta, kaas oo hadda kasoo muuqday cudud candho- haysta shaashad aad u balaaran.
image kale oo ka mid ah hardware cusub Google Glass. Sawir: FCC / Google
Sida rasmiga ah, Google ayaa qiray jiritaanka qalab cusub ee, inkastoo xaqiiqda ah in ay gaynayso ganacsi-diiradda ayaa aqoonta dadweynaha tan iyo bishii Luuliyo. wararka xanta ah kuwa sidoo kale soo jeediyay in version cusub ee Glass lagu dhisay in ay biyuhu iyo adag-xiran, iyo sidoo kale kuuskuus casriga la filayaa sida wifi wanaagsan, Processor dhakhso, iyo camera iyo batari hagaagay.
Shirkadda la soo dhaafay ayaa sheegay in arrinta la Glass ahaa "qalin" ka ay meel tijaabo ah horyaalka sare cilmi X Google, iyo kaalinta ay ka taliyaan ee Tony Fadell, ninkii ka danbeeyay ka iPod iyo Nest shirkadda smart-guriga.
ka dib gaynayso waxaa ku xigi kara version ah macaamiisha cusub. Laakiin hadda, qalabka waxa ay ku socotaa macaamiisha ganacsiga kuwaas oo ay helaan qiimaha degdeg ah ka isagoo soo bandhigay madaxa-dhajinta a. Ruxma isticmaalka-kiis waxaa ka mid ah qalliin iyo wax soo saarka, halkaas oo gacan-free helitaanka screen cod-ay gacanta ku noqon kartaa mid aad u faa'iido leh. Dib-u-bilaabidda galay jawi ganacsi ayaa sidoo kale u oggolaan lahaa shirkadda si looga fogaado in ay la kulmaan in badan oo arrimaha la kulmay by users macaamiisha, gaar ahaan walaac asturnaanta keentay by xiran camera madaxa-qaadeen meelo dadweynaha.
21182	0 Alex Hern, Qodobka, Google, Google Glass, News, Technology
← Dardaaranka 2016 sannaddii ciyaaraha xaqiiqada dalwaddii qaadataa off? The 25 ugu kulan video filayo of 2016 →